China cnc Kudzingwa chikafu michini fekitari uye vagadziri Yungong
Nemazvo kukanda chikafu michini
Nemazvo kukanda chikafu michini kazhinji inotora isina simbi zvinhu, izvo zvinoda yakakwira pamusoro pekupedzisira. Iyo isina simbi modhi inowanzo shandiswa mu316l, 304 simbi, ine yakaoma chimiro.
Zvimuchina zvekudya - - kurongedza auger
Inoshandiswa kune spice poda yekuzadza muchina / poda kurongedza muchina / auger yekuzadza muchina chikafu muchina. Nyama yekukuya
Material: Stainless simbi, kabhoni simbi
Iyo simbi isina simbi zvinhu zvinonyanya kupedzwa nesilica sol maitiro.
Isu tinosevenza chikafu & indasitiri yemukaka munzvimbo zhinji, kubva kune nyama slicers, kuenda kumaswiti uye chokoreti inogadzira michina, echando-cube michina, vagadziri vekofi, kugadzira huku, uye kushambadzira dishwasher.
Chaizvoizvo chikafu & chikumbiro chemukaka zvinosanganiswa uye zvinofambiswa kuti uve nechokwadi chekuchena kwakanyanya.
Yungong semumwe wemazita anovimbwa kwazvo muindasitiri yezvikafu nemukaka uye ane nzira uye kuziva nzira yekugadzira mhando dzekudyara dzemhando yepamusoro dzinosangana nezvinotsanangurwa zvinoda zvekudya zvako uye / kana zvekudai.
Nei Investment Kukanda Kwechikafu Kugadzira Maindasitiri?
Kune zvakawanda zvakanakira simbi isina tsvina yekudyara kukanda kupfuura mamwe maitiro esimbi.
Kunyangwe paine nhoroondo refu yesimbi isina tsvina yekudyara kukanda, makambani mazhinji anonyatsoshandisa maitiro aya kune mabhenefiti ayo anopihwa.
Iwo mabhenefiti makuru akanyorwa pazasi:
Yakagadziridzwa Hunhu:Investment Kudzingwa inowanzoenderana nemazvo kukanda maitiro. Saka iyi yekukanda maitiro inogona kugadzira izvo chaizvo zvikamu zveiyo yekugadzira indasitiri yekugadzira.
Yakaderedzwa Machining: Nekuda kwekuti aya mafuru anokonzeresa mune chaicho chigadzirwa chekupedzisira pane michina mishoma yechipiri uye kugadziridzwa kunofanirwa kuitwa kune simbi kuitira kuti iwane kukosheswa kwevatengi mushure mekuumbwa.
Izvi zvinochengetedza mari mukufamba kwenguva sezvo zvichidonhedza kumashure panguva yegadziriro yekugadzira.
Dhizaini inogadziriswa: Kazhinji, kudyara kwekudyara kunoitwa chikamu chimwe chete panguva.
Izvi zvinopa vatengi sarudzo yekugadzira saizi yakasarudzika yezvinhu zvemuchina wekudya.
Izvi zvinoponesa iyo yekugadzira chirimwa zvakanyanya zvakanyanya nguva uye zviwanikwa sezvo ivo vasingafanire kuisa basa muzvigadzirwa izvo mutengi asina chaanoda chaicho.
Pashure: Kukanda kweKudzimisa Midziyo Midziyo
Zvadaro: Hardware kukanda - simbi isina kukanda kukanda
Chikafu Machine Investmentcasting
Chikafu Machine Precision Kukanda
Chikafu Machina Kukanda
Chikafu Machina Kukanda Foundry